NBR 14136 10A တိုးချဲ့မှု ကြိုး ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ပေးသွင်းသူများ - လက်ကားရောင်းအား စိတ်ကြိုက် မြင့်သည် အရည်အသွေး NBR 14136 10A တိုးချဲ့မှု ကြိုး - Bohao
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > တိုးချဲ့မှု ကြိုး > ဘရာဇီး တိုးချဲ့မှု ကြိုး > NBR 14136 10A တိုးချဲ့မှု ကြိုး
NBR 14136 10A တိုးချဲ့မှု ကြိုး
ငါတို့ ထောက်ပံ့ရေး NBR 14136 10A တိုးချဲ့မှု ကြိုး ၏ မြင့်သည် အရည်အသွေး နှင့် Inmetro, UC ခွင့်ပြုချက်။ ငါတို့ ကျိန်စာ ကိုကို သို့ တိုးချဲ့မှု ကြိုး အများကြီး နှစ်ပေါင်းဖုံးအုပ် အများဆုံး ၏ ဥရောပ နှင့် အမေရိကန် စျေးကွက်။ ငါတို့ ဖြစ်ကြသည် မျှော်လင့်ပါတယ် သို့ ဖြစ်လာသည် မင်းရဲ့ ရေရှည် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွင် Chတွင်a.
NBR 14136 10A တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး ၏ 1.Product နိဒါန်း
NBR 14136 10A တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး ၏ 2. Product Parameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်)
ဘရာဇီး UC 2P + T Plug
ရှပ်တာမပါဘဲ N Socket ရိုက်ပါ
3.Product Feature And Application of the NBR 14136 10A တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး
NBR 14136 ဘရာဇီး Power Cord Plug၊ 20Amp 250 Volt AC တပ်ဆင်ထားသောကြိုးကြိုးအမျိုးအစားဖြစ်သည်ï¼Inolero, TUV, UC မှသတ်မှတ်ထားသော Connector စံသတ်မှတ်ချက်များသို့ ၂ ဝင်ရိုးစွန်း ၃ ဝါယာကြိုးအမျိုးအစား N 20 Am ၂၅၀ ဗို့အားအမျိုးသမီးacleရိယာ Brazil AC ပလပ်နှင့် Sockets များသည်ဘရာဇီးတွင်သာအသုံးပြုသည်။
အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိ Extension ကြိုးများဖြစ်နိုင်သည်။ ၁ မီတာ၊ ၃ မီတာ၊ ၅ မီတာ၊ ၁၀ မီတာအရှည်၊ ၂၀ မီတာ (တစ်ခုချင်းစီသီးခြားစီရောင်းသည်) မှရွေးချယ်သည်ï¼လိုအပ်သည်အဖြစ်စသည်တို့ကို
4. Production Details of the NBR 14136 10A တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး
ကျနော်တို့ဥရောပ CEE7 ထုတ်လုပ်သည်-Schuko extension ကြိုး၊ ဆွစ်ဇာလန် SEV 1011၊ အီတလီ CEI 23-16, ဗြိတိန် BS1363, တောင်အာဖရိက SABS164, Australia AS / NZS 3112, China GB extension ကြိုး၊ IEC320 extension ကြိုး၊ IEC 60309 စက်မှုတိုးချဲ့စက်များသည်နိုင်ငံတကာဘေးကင်းလုံခြုံမှုခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ရိုဟင်ဂျာများ။
5.Product Qualification of the NBR 14136 10A တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: Inmetro, UC
6.Deliver, Shipping And Serving of the NBR 14136 10A တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး
hot Tags:: NBR 14136 10A တိုးချဲ့မှု ကြိုး ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ, လက္ကား, စိတ်ကြိုက်, မြင့်သည် အရည်အသွေး, အခမဲ့ နမူနာ, တွင် စတော့ရှယ်ယာ, လျှော့စျေး, အနိမ့် စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း